Sida Lagu Garto Haddii Wiil Ama Gabar Aysan Ku Rabin - Aayaha
Sida Lagu Garto Haddii Wiil Ama Gabar Aysan Ku Rabin
Aayaha editorNovember 22, 2020
Waxaa jiraan waqtiyo aad qof jeclaan kartid laakiin qofkaas dhinaca kale uusan ku jecleyn adiga isla markaana uu ku siinayo calaamado aan toos ahayn ama uusan si toos ah kuugu odhaneyn kuma rabo.
Sidaa darteed, waa kuwaan qaar kamid ah calaamadaha lagu garto marka gabadha ama wiilka uusan ku rabin.
1. Saaxiibo ayaa nahay
Haddii isaga/iyada aysan dooneyn inaad shukaansato, waxay kugu hayn doonaan aagga saaxiibbada oo haddii aad isku daydo inaad sameyso dhaqdhaqaaq kasta ama aad qaado tallaabo wuxuu kuu sheegayaa ama ay kuu sheegeysaa inaad labadiinu saaxiib tihiin oo keliya.
Sidaa darteed tani waa tilmaan cad oo muujineysa inaadan wada socon karin.
2. La-kulankaaga oo la iska ilaaliyo
Haddii iyada ama isagu aanu adiga ku rabin, markaa had iyo jeer wuxuu qofkaas iska ilaalin doonaa inuu kula kulmo. Wuxuu qaab kasta iskaga ilaalin doonaa inaad wada kulantaan maadaama qofkaas uusan ku rabin haddii ay noqon lahayd inuu marmarsiiyo kuula yimaado ama uu si cad kuugu sheego inuusan kula kulmi karin.
Isaga ama iyadu waxay had iyo jeer uga jawaabi doonaan fariimahaaga qaab aadan rabin oo xitaa way lasoo daahayaan jawaabaha farriimahaaga.
Tani sidoo kale waxay ku dareysaa liiska inuusan isagu ama iyadu adiga ku rabin oo aadan wada socon karin.
4. Si farsameysan oo loo diido qorsheyaashaada
Haddii aad la timaado talooyin ku saabsan qorshooyin mustaqbal ama aad usoo bandhigto rabitaan ah inaad dooneyso inaad mustaqbal la wadaagto, isaga ama iyadu waxay kuu sheegi doonaan inaysan ballan qaadi karin taas sababo jira awgood.
Haddii isaga/iyada ay ku rabto markaa way kaa yeeleysaa qorshooyinkaaga waliba si farxad iyo soo dhaweyn leh.